Isimo socansi sivuselela ubuchopho | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Learning Isimo socansi
Ubusha yisikhathi ekukhuleni kwethu lapho ubuchopho bethu sebukulungele ukuba nomoya wokuziphatha ngokocansi (noma ukuhlelelwa) lapho ulungiselela ukuba mdala. Leso simo singenzeka ngokuxhumana nabalingani bangempela bempilo kanye / noma ngokuxhumana nezithombe zocansi ze-intanethi. Lokhu kufunda kuzokwakha izindlela ezi-super-fast neural eziqinile. Izokwakha kabusha ubuchopho bethu nesimo sethu sengqondo kwezocansi nothando ngokuzayo. Konke lokhu kuncike kulokho esikufundayo ngalesi sikhathi esibucayi sentuthuko. Kungaba nzima ukususa umkhuba ogxile kakhulu owenziwe ngalesi sikhathi esikhathini esizayo.
Kuze kube yilapho i-intanethi itholakele, intsha ingabheka izithombe zobulili ezingcolile kumagazini noma kuma-DVD, okuqhutshwa ubuchopho ngokungazelelwe kujabulise ubulili. Baya "bamba" ngoba izinto ezinjalo zazingabantu abadala kuphela. Ngokuvamile bekufihliwe ngaphandle kwendawo ngobaba, abadala noma abagcini bezitolo. Bangeke basebenzise kalula ukucabanga kwabo ukucabanga ngezidumbu noma amantombazane ekilasini labo ukukhulula ukuhlukunyezwa ngokocansi. Njengoba beqala ukusebenzisana kakhulu nabanye abesilisa nabesifazane abasha, babezoqhubeka nomzila onzima wemizwelo ekuhloliseni imizimba yomunye nomunye eholela ekuthandaneni ngocansi ngesikhathi esithile.
Namuhla iningi lentsha 'liqala' imibuzo yalo yezocansi ngama-hard-core porn ukubhebhethekisa imicabango yabo. Aziqali ngezithombe ezithambile ezingabesifazane abagqoke kahle lapho beza khona. Ngaphezulu kwama-80% wezinto zocansi eziqukethe udlame olungqingili olubhekiswe kwabesifazane. Izinto ezibuhlungu, ezishaqisayo nazo zivusa ucansi ikakhulukazi ebuchosheni bentsha ngoba inomkhawulo ophakeme kakhulu wenjabulo enjalo kunengqondo yengane noma yabantu abadala. Abantu bangabona okweqile okwedlulele ngesikhathi esisodwa kuma-smartphone abo kunalokho obabomkhulu babo abakubona esikhathini sokuphila kwabo. Umphumela walokhu kusakazwa kwezithombe zobulili ezingcolile eziqinile kubumba kabusha ubuchopho nomsebenzi wabo.
Ubuchopho abuvumelanisiwe ne-porn
Ubuchopho bethu abukalungisanga ukubhekana nale tsunami yokukhangela izinto ezitholakale kule minyaka eyishumi edlule ngenxa yokufika kwe-intanethi ye-broadband. Imithelela enkulu yempilo ebikwe abantu abasha kanye nabaqeqeshiwe bezempilo: ukucindezeleka; ukukhathazeka komphakathi; ukuhlukaniswa komphakathi; ubuchopho obungqondo; ukubuka ngokucindezela kwezithombe zobulili ezingcolile kuyi-Internet naphezu kwemiphumela emibi kanye nezinkinga ze-erectile.
Yini ubuchopho okufanele buyenze uma kunokufinyelela okungenamkhawulo kumvuzo omkhulu wokuvuselela ongazange uguquke ukubhekana nawo? Amanye ama-brains alinganisa - hhayi ngendlela enhle. Inqubo ihamba kancane kancane. Ekuqaleni, ukusebenzisa i-porn kanye nokushaya indlwabu ku-orgasm kuxazulula ukuhlukunyezwa ngokobulili kanye nokubhalisa njengokwanelisayo.
Kodwa uma siqhubeka sibheka ngokweqile, ubuchopho bethu bungase buqale ukusebenza ngokumelene nathi. Kuzivikela ngokumelene ne-dopamine ngokweqile ngokunciphisa ukuphendula kwayo kuwo, futhi sizizwa singaphansi kancane. Lokhu kunciphisa ukuzwela ku-dopamine kudonsa abasebenzisi abathile ukuba bafune ukusesha okunamandla kakhulu, okuyinto, futhi, kuqhuba izinguquko ezihlala njalo, izinguquko zangempela zobuchopho. Kungaba yinselele ukubuyela emuva.
Kungani kufanele kube njalo? Yini ehlukile ku-porn ye-edlule?
<< Imemori nokufunda Izithombe Zobulili Ezingcolile Nezokuqala >>